Fitakiana ara-dalana :: Manambana hidongy ny fifidianana loholona ireo mpanohitra - ewa.mg
News - Fitakiana ara-dalana :: Manambana hidongy ny fifidianana loholona ireo mpanohitra
Hidongy ny fifidianana loholona hotanterahina, amin’ny zoma 11 desambra 2020, ny fianakaviamben’ny mpanohitra, raha tsy tomombana avokoa ireo fepetra aradalàna mifanaraka amin’izany. « Hajao aloha izay voalaza ao amin’ny andininy faha-80 ao amin’ny fehezan-dalàna mifehy ny fifidianana », hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, omaly.
Voalazan’io andininy io fa « isan’ireo mpifidy lehibe handray anjara amin’ny fifidianana ireo lehiben’ny faritra sy ny lehiben’ny faritany miaraka amin’ireo lefiny ». « Tsy feno ny fepetra ka fifidianana tsy ara-dalàna no tadiavina hatao eto ary tsy azo ekena », hoy izy.
Nohamafisin-dRamalason Olga, loholon’ny antoko TIM ihany koa fa « tsy te handray anjara amin’ny fifidianana tsy ara-dalàna ry zareo ». « Amboletra no atao eto, hoy kosa izy, satria tsy mba nakàna ny hevitry ny antenimiera akory na io fampihenana ny loholona ho 18 io aza ».
Etsy an-daniny, efa miatrana ireo antoko miaradia amin’ny fitondrana. Nivory nandinika ny fomba hiatrehana an’izany fifidianana handraisan’ny mpifidy lehibe anjara izany izy ireo tetsy amin’ny Arena Ivandry, omaly. Nitarika ny fihaonana teny an-toerana ny sekretera nasionalin’ny antoko Tanora malaGasy Vonona sady governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery.
Tsy nisy nipika ny resaka. Voalaza anefa fa efa eo ampikarohana an’ireo kandidà handray anjara amin’io fifidianana loholona io ireo mpanao politika akaiky ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. « Mbola ao anatin’ny dinika mihitsy izao ka tsy misy azo resahana aloha », hoy fotsiny ny loharanom-baovao iray.
L’article Fitakiana ara-dalana :: Manambana hidongy ny fifidianana loholona ireo mpanohitra est apparu en premier sur AoRaha.